#Ganacsiyada Pakistan iyo India ayaa hakad soo kala dhex galay kadib wadahadaladii naadir ahaa ee Kashmir
Pakistan ayaa ku eedeeysay New Delhi xad gudub xaga Xuquuqul Insaanka ka dib shirkii Golaha Amniga, India ayaa tiri 'arrimaha gudaha ee kashmir uu yaal'.
By Caalamka On Aug 17, 2019 Last updated Aug 17, 2019
Qeybt Hindida ay maamusho ee Kashmir ayaa weli ku jirta bandoo gabi ahaanba ku dhawaad ​​laba toddobaad [Muzamil Mattoo / xuquuda sawirka Getty Images]
Qaramada Midoobay – Ergooyinka ka socda wadamada deriska ah ee haysta hubka nukliyeerka waa Hindiya iyo Baakistaan ayaa ganacsigooda xayiraad saaray xili ay kulan ku lahayeen qolka shirarka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay , ka dib markii xubnuhu ay ku kulmeen shir ay albaabada u xirnaayen wadahadalada dhif ah ee gobolka muranka dhaliyay ee Kashmir .
Kulankan oo dhacay Jimcihii ayaa yimid iyadoo Kashmir-ta ay Hindiya maamusho uu ku sii jiray Bandoo Ay milatari sareen muddo 12-maalmood oo isku xigta ka dib go’aankii qalafsanaa ee muranka badnaa ee xubin ka tirsan dawladda Hindiya ka soo saartay New Delhi ee ah in laga laabto maqaamkii gaarka ahaa ee ay leyihiin Muslimiinta ku nool gobalkaas ee uu qeexayo dastuurka Hindiya.
Xubnaha Golaha ayaa kulankoodu uu socdey 90 daqiiqo iyadoo ay sii kordhayaan xiisada ka taagan gobolka lagu muransan yahay ee Himalayan, kaas oo inta badan fowdo ka dhex aloosneyd India iyo Pakistan – labada dal, oo labaduba sheeganaya Kashmir in ay si buuxda u xukumaan laakiin qayb ka ah, ayaa ku dagaalamay laba ka mid ah sedexdoodii dagaal ee ka dhexmarey. dhulka lagu muransan yahay. Hindiya waxaay sidoo kale kula dagaalamaysaa kacdoon Jamu sedex sano ah Kashmir oo galaaftay nolosha kumanaan kun.
Pakistan ayaa codsatay in kulanka Golaha Amniga uu dhaco iyaadoo warqad uu dirtey 13-ka Agoosto kadibna waxaa sidaas loogu yeeray xubinta joogtadda ah Shiinaha.
15-ka xubnood ee ka mid ah golahan ayaa warbixinno ka dhageystay Oscar Fernandez-Taranco, kuxigeenka xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay ee taageerada dhisidda iyo Carlos Humberto Loitey, oo ah lataliyaha milatariga ee UN-ka ee howlaha nabad ilaalinta.
Fadhiga ka dib, Maleeha Lodhi, danjiraha Pakistan ee Qaramada Midoobay, waxaay sheegtey in shirkii ugu horeeyey ee golaha ee ku saabsan Kashmir in ka badan 50 sano ay tahay “tallaabada ugu horreysa” ee Islamabad ay ku hanan doonto taageerada shacabka Kashmir.
“Kulankan wuxuu baabi’inayaa sheegashada India ee ah in Jammu iyo Kashmir ay tahay arin gudaha India ah. Maanta, adduunka oo dhami waxaay ka wada hadlayaan gobolka ay qabsadeen iyo xaaladda halkaas ka jirta,” ayay u sheegtay warfidiyeenka.
“Dadka Jammu iyo Kashmir waxaa laga yaabaa inay xayiraad lagu soo rogey oo aysan hadli kariin, codkoodana lagama maqli karo guryahooda iyo dhulkooda, laakiin codkooda maanta waxaa laga maqlayaa Qaramada Midoobay codkoodana marwalba waa la maqlayaa maxaa yeelay Pakistan waligeed wxay uu taagnaan doontaa iyaga difaacooda. ”
Daqiiqado kadib, Syed Akbaruddin, danjiraha India u fadhiya qaramadda midoobey, wuxuu u sheegay weriyeyaasha in Kashmir arrinteeda ay tahay “arrin gudaha ah”oo ay quseyso India “si tartiib tartiib ah looga qaadayo dhammaan xayiraadihii hore uu sarnaa” dhawaan gobolka laga qaadayo maadaama ay ” ku socoto jiidka xasilinta ee xaalad caadiga ah”.
“Waxaa walaac gaar ah aan ka qabna ayaa ah in hal waddan ay u adeegsadaan ereybixinta jihaadka ka dhanka ah qomiyad iyo buunbuninta rabshadaha Hindiya, oo ay ku jiraan hogaamiyayaashu,” ayuu yiri Akbaruddin, isaga oo aan magaca dalka aan soo hadal qaadin.
“Waan ka xunahay in argaggixisada la sii hurinaayo, luqadda iyo hadalada jahwareerka dhalinkara ee ay leeyihiin dadka ay tahay inay sifiican waa in aad il gaar ah ku ilaalisan oo aad ogaatan.”